Porn ကစားတဲ့ (2010) မှာဆုံးရှုံးသွား - သင်၏ဦးနှောက် Porn တွင်
Porn ကစားတဲ့ (2010) မှာဆုံးရှုံး
porn, အထူးသဖြင့်အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့် BDSM porn သည်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်မဟုတ်ဘဲဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ပြုလုပ်သည်။ ဤပစ္စည်းသည်ရှုပ်ထွေးပြီးအလွန်ပြင်းထန်ပြီး၎င်းကိုနားလည်ရန်နှင့်ထည့်သွင်းရန်ရင့်ကျက်မှုလိုအပ်သည်။ ငါဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုဆန့်ကျင်နေစဉ်၊ ထိရောက်သော၊ လက်တွေ့ကျသော၊ လက်တွေ့ကျသောလိင်ပညာရေးကိုမရရှိသေးသည့်လူငယ်များကဤရုပ်ပုံများကိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ~ ဒေးဗစ်လလေပါရဂူဘွဲ့ (ပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ရေး - လီသည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းသူဖြစ်သည်။ သို့သော်ယနေ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်သတိထားရဆဲဖြစ်သည်။ )
အများအပြား porn အသုံးပြုသူများအတွက်, အရသာ shift-ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးခက်ခဲ-Core ပစ္စည်းမှမြင့်တက်။ ထို့ပြင်ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်အဆိုပါ porn တစ်စုံတစ်ဦးကသူ / သူမရှည်လျားမတိုင်မီပင်ပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ်တစ်ခုခုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်သောစွန့်စားမှုပိုမိုလာအတူစတင်သည်။ သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားများကိုလည်းကြောင်းအကြံပြု အစောပိုင်းက တစ်စုံတစ် ဦး ကအစွန်းရောက်ပစ္စည်းများကိုစတင်ကြည့်ရှုလာသည်၊ ဒီနောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့လူငယ်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်စပြီးစတင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် Playboy မဂ္ဂဇင်းများ။ သူတို့နှင့်အတူစတင်အဆိုပါ porn မှ habituate အဖြစ်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် kinkier ပိုမိုအကြမ်းဖက်ပိုမညီကြောင်းပစ္စည်းများမှဆွဲဆောင်မှုကျေးဇူးတင်စကားကိုရှာဖွေ dopamine-related အေးစက်.
အဆိုပါပေါင်းဘက်တွင်, ကွာအားလုံး porn နှင့်ညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်ကနေတည်းခိုဖြည်းဖြည်းသည်ဤခေတ်ရေစီးကြောင်းနောက်ကြောင်းပြန်။ ဒါပေမယ့်ဦးနှောက်ကို restart အချိန်နှင့် unaccustomed willpower ကြာပါသည်။ Relapse invitingly beckons, နှင့်မလိုချင်တဲ့ဦးနှောက်လမ်းကြောင်းခိုင်မာစေ။ အများစုမှာအသုံးပြုသူများကိုသာသူတို့အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ erectile အခက်အခဲများရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကြီးထွား arousal ဘို့မိမိတို့ကျပန်းရှာဖွေရေးသူတို့ကိုဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးဘယ်မှာအကြောင်းကိုမခံမရပ်စိုးရိမ်ကြီးထွားလာသောအခါသဘောပေါက်လာသောအခါကို restart ၏သူရဲကောင်း feat ဆောင်ရွက်ရန်။ ထိုအခြိနျတှငျသို့သော်သူတို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုယ်နှိုက်ကကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတောင်းဆိုတဲ့အစွမ်းထက်ခလုတ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်၏အဓိကသာဓက (HOCD ဖြစ်ပါသည်လိင်တူဆက်ဆံ obsessive-compulsive ရောဂါ): ဖြောင့်ယောက်ျား တယောက်သို့မဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံသူညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့်ဖွင်။ (သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောကလေးက porn ကဲ့သို့သောအခြားဖြစ်နိုင်ခြေပိုမိုစိတ်ပျက်စရာနေရာများ, ရှိပါတယ်။ )
တစ်နှစ်ဆယ်နှစ်အရွယ်ခြင်းဖြင့်ပြန်ပြောပြအောက်ပါပုံပြင်, (ထိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်၌ငါ့လမ်းလာကြပြီအကြောင်းကိုတစ်ဒါဇင်အလားတူအကောင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီ post မဟုတ်ဘဲရက်စွဲပါဖြစ်ပါတယ်):
ကျနော့်သူငယ်ချင်းများကအင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားသောရုပ်ရှင်များအကြောင်းပြောကြသည်။ ဒါနဲ့အင်တာနက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲငါ porn sites တွေကိုသွားခဲ့တယ်။ ခဏကြာတော့ပုံမှန် porn ဟာအလှည့်မဟုတ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါလိင်တူချစ်သူလိင်တူချင်းချစ်သူမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကူးပြောင်းခဲ့တယ်။ (အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်အခြားလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ !)
နှစ်တွေကုန်လွန်သွားပြီးတစ်နေ့မှာလိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူယောက်ျားလေး porn ကိုရှာဖွေနေစဉ် shemale porn အတွက်ကြော်ငြာတစ်ခုရခဲ့တယ်။ ငါတကယ်ဖြစ်ပျက်ရှင်းပြလို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမစွဲခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်လိင်တံရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ရုတ်တရက်အားလုံးဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပုံရတယ်။ ဒါကမှန်ကန်တဲ့စကားလုံးဟုတ်လားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး
အသစ်တစ်ခုဖြစ်သကဲ့သို့ငါ့ ဦး ခေါင်းကိုရိုက်ထည့်လိုက်သည် လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူများသည်ယခုအခါသာမန်လူများဖြစ်နေပုံရသည်။ တစ်ခုခုပြောတာကတော်တော်မှန်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာနဲ့အမျှတကယ်တော့ကာယပိုင်းအရနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါစဉ်းစားနေတယ်၊ ​​“ ဒါကမှန်တယ်လို့မခံစားရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုနှိုးလိုက်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်?"
ငါရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် တစ်ပါတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (ဒီ ၁၅ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးအတွက်အရမ်းခက်တယ်) ပြီးတဲ့နောက်ပုံမှန် porn ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ မိန်းမနှင့်ယောနိကိုကျွန်ုပ်စွဲမက်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ထိုအခါမူကားငါလိင်တံနှင့်ယောနိနှင့်အတူအမျိုးသမီးများ၏ "Futanari" အနုပညာလက်ရာများကိုကြည့်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်နောက်တစ်ခုပါ။ ထိုအခါငါ shemale porn ပြန်သွားလေ၏။
ဤရွေ့ကားနောက်ဆုံး 4-5 နှစ်ကအရမ်းရှုပ်ထွေးခဲ့ကြပြီ။ လူမှုရေးအရ၊ ငါဟာအမျိုးသမီးတွေကိုဆွဲဆောင်တယ်၊ ယောက်ျားတွေကိုငါမစွဲလမ်းဘူး။ အဲဒါကသဘာဝကျပါတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်မယောက်ျားကလိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူကိုပိုပြီးနှိုးဆွသလိုကြောက်ရွံ့လေလေ၊
ငါခဏတစ်နှစ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။ ငါညဥ့်အခါအနေဖြင့်စိတ်ကူးစမ်းသပ်ပြီး။ ငါအဆုံးသတ်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ပရောပရည်, နှင့်အခြားမိန်းမများကိုကြည့် "ဒီမိန်းကလေးပဲငါ့ကိုကြည့်! လုံးဝယောက်ျားလျစ်လျူရှု။ ငါ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်း“ ခံစားချက်” မရှိဘူး။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောစိတ်ကူးယဉ်ခံစားချက်မျိုးရှိခဲ့လျှင်၊ ကျွန်မသည်နှလုံးခုန်ခြင်းတွင်ဇီဝလိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သော်လည်း၊ သဘာဝတရားသည်အချစ်မဟုတ်ပါ။
လိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူများကိုလိင်တံမုန်းတီးမှုများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးတဲ့နောက်လိင်တူချစ်သူ၊ ထူးဆန်းတယ် ငါသုက်ထွက်တော့တိုင်းမိန်းမနဲ့ယောနိကိုချက်ချင်းပဲစဉ်းစားမိတယ်။ shemale porn ကိုတောင်ကြည့်နေရင်တောင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှပသောမိန်းမနှင့်လိင်ဆက်ဆံကြောင်းအမြဲတမ်းစိတ်ကူးနေသည်။ နက်နက်နဲနဲငါဖြောင့်မတ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်သိတယ်။ အစစ်အမှန်ဘဝ၌ငါမိန်းကလေးများနှင့်စကားမပြောနိုင်ပါ။ ငါသူတို့ကိုဆွဲဆောင်တယ်။
အကြှနျုပျ၏ shemale စွဲငါမစွမ်းအင်ရှိခြင်းနှင့်ထွက်မသွား, နေ့ရက်တိုင်းက 4-5 ကြိမ်ပျမ်းမျှ masturbating ရာမှနောက်ထပ်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ကျွန်မကောလိပ်သွား၏အစား masturbate ဖို့အိမ်မှာနေခဲ့တယ်။ ထို့နောက်မျှမျှတတမကြာသေးမီကကျွန်မ shemale ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင် arousal ၌လူကိုရှာဖွေတုန်လှုပ်သွားခဲ့ရသည်။ ဤသည်စာသားအကြှနျုပျအဘို့နောက်ဆုံးကောက်ရိုးခဲ့, ငါငါတကယ်တစ်ဦးပိုမိုဆိုးရွားလာစွဲရှိသည်နားလည်သဘောပေါက်လာတယ်။
ဒီရက်ဟာငါစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာကောင်းတဲ့စင်မြင့်ပါ။ နှစ်ရက်အကြာမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မလိုက်ဘဲတကိုယ်တော်မိန်းကလေးနှင့်လိင်တူချင်းလိင်တူချစ်သူတွေကိုနှိုးဆွခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် shemale porn နဲ့အတူငါကြာကြာမူးနေနိုင်ပါတယ်။ ငါကတစ်နေ့မှာ ၉-၁၁ ကြိမ်လောက်တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေတာပဲ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံက“ မညီကြောင်း” နဲ့“ ဆိုးတယ်” ပိုများလာတယ်၊ ပုံမှန်ပုံစံက ၁-၃ ဖြစ်မယ်၊ ဗီဒီယိုတွေကဖြောင့်တယ်၊ ၄-၆ ကျားမ၊ ၇-၉ ကြိမ်မှာသူတို့ကလိင်တူချစ်သူ / ငါ့ကိုလွှမ်းမိုးခံရလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတော်တော်ရှုပ်ထွေးပါတယ်။
မကြာသေးမီကငါ 3-4 နေ့ရက်ကာလအဘို့အကြှနျုပျ၏မိသားစုနှင့်အတူ သွား. ဝေးကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်ထဲကနေကောင်းစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါခဲအစဉ်အဆက် shemale porn စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါနှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တကယ့်စိတ်ကူးယဉ်ပါလိမ့်မယ်စဉ်းစားကမ်းခြေတလျှောက်လမ်းလျှောက်သတိရပါ။ ထိုအခါငါသည်ငါ၏ဦးခေါင်းအတွက်ရင်ခုန်စရာအတှေးအမြိုးသမီးမြားအကြောင်းကိုအမြဲရှိပါတယ်သော်လည်းငါဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးသတိရကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြက်ယယ်။ ကျွန်မအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါငါရက်ပေါင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ဖြောင့် porn မှ masturbated ။ ထို့နောက်နောက်ကျော shemale porn ရန်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကမွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ ပထမဆုံး shemale ကြော်ငြာကိုတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဖူးပါက၊ ဤအရာသည်တစ်ခါမျှမဖြစ်ခဲ့ပါ၊ သို့သော်ဟေး၊ အတိတ်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ ငါ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ငါအရမ်းကြိုးစားခဲ့မယ်။
ငါမကြာမီအနာဂတ်တွင်ဤပြproblemနာကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လာလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းပြောကြားခဲ့သည် - လာမည့်မျိုးဆက်သစ်များ - လက်တွေ့တွင်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်မွေးဖွားလာကြပြီး၎င်းအားလုံးကိုမောက်စ်ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သော - ကျွန်ုပ်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားလာလိမ့်မည်။ ငါဒီကိစ္စကိုတွေ့တဲ့အခါ၊ ညစ်ညမ်းမှုမကင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပိုက်ဆံအနည်းငယ်လှူမယ်။ ငါကကောင်လေးတွေအများကြီးလို့မထင်ခင်ငါရိုးသားမယ်။
အခြေခံအားဖြင့်ဒီဟာကဒီစွဲလမ်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်အပျိုစင်ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ ငါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အရည်းစားရှိခဲ့တယ်။ ငါလုံးဝလုံးဝတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးအစားသူမစဉ်းစားနေသည်သတိပြုမိသည်။ ငရဲ၊ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်၊ သူမကငါ့အတွက် ၀ ယ်ထားတဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီ (အမှားအရွယ်အစား) ကိုတောင်မှဖောက်ထွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ဘောလုံးကိုပေါက်ကွဲစေသလိုပဲ ဟားဟား! ငါအံ့သြဖွယ်မိန်းကလေးရှာပြီးသူနှင့်အတူတကယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ရချင်တယ် ကျန်တဲ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့ငါ့အိပ်ခန်းထဲမှာထိုင်မနေချင်ဘူး။
လိင်နှင့်အစာစားခြင်းကို ဦး စားပေးသော ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းသည်အလွန်စရိုက်ကျသဖြင့်၎င်းသည် dopamine မည်မျှထုတ်လွှတ်သည်နှင့်အညီလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု၏တန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်သည်။ အသုံးပြုသူသည် superstimulating တစ်ခုခုကိုတွေ့ရှိပါကသူ၏မူလ (limbic) ဦး နှောက်သည်တန်ဖိုးရှိသောအရာတစ်ခုခုရှိသည်ဟုယူဆပြီးသူ့ကိုတိုက်တွန်းသည်။ အပြည့်အဝက exploit.
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်သူ၏ပျော်ရွှင်သောတုံ့ပြန်မှုကိုယာယီတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့မှသာသူသည်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုကြီးမားသော dopamine များသောအားဖြည့်ခြင်းအတွက်သာသွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများနှင့်မတူဘဲယနေ့ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများသည်လုပ်နိုင်သည် အမြဲ ပိုပြီးဦးနှောက်-jolting တစ်ခုခုကိုရှာပါ။
porn ကစားတဲ့မလိုချင်တဲ့နေရာများမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပေမယ့်ပြဿနာကိုတိကျသောအကြောင်းအရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါပြဿနာအတွက်တည်ရှိသည် ကနဦး overstimulation ၏ပြင်းထန်မှု- ဒီကောင်လေးရဲ့အမှုအခင်း၊ ထိုနေရာတွင်ပိုမိုအားကောင်းသောအရာတစ်ခုခုအတွက်တမ်းတမှုစတင်သည်။ သူ၏အရသာပြောင်းလဲသွားသည်ကိုသတိပြုပါ ပြန်. သူကအင်တာနက် porn ကိုရပ်တန့်အခါတိုင်း။ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုယခင်ကပင်ဆိုလိုသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သူ၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲအော်ဂဇင်ကိုအစကန ဦး အလုံအလောက်မသိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၌စိတ်ညစ်စရာ။
အသုံးပြုသူများသည်“ အကောင်းဆုံး” porn ကိုအမြန်ဆုံးသို့မဟုတ်အများဆုံးပေါက်ကွဲစေနိုင်သောအရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသော်လည်း၎င်းသည်အန္တရာယ်အရှိဆုံး porn ဖြစ်နိုင်သည်။ ဦး နှောက်အားလုံးသည်တူညီစွာထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် superstimuli သည်အသုံးပြုသူ၏အရသာသည်မျှော်လင့်မထားသည့်အပြင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေသောလမ်းကြောင်းများသို့ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။
လူငယ် ဦး နှောက်သည်အလွန်ပလပ်စတစ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုလူငယ်၏နောက်ဆက်တွဲရေးသားချက်များကသူသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုရှောင်ရန်လုံးဝအောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်ရုန်းကန်နေရသည်ဟုဖော်ပြသည်။ သူ၏ကိစ္စတွင်အရသာအပေါ်သူ၏ရှုပ်ထွေးမှုများသည် ဦး နှောက်တွင်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးစိုးရိမ်စိတ်ကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသည့်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရဖြစ်စေသည်။ စကားမစပ်အလွန်ရှိပါတယ် တက်ကြွဖိုရမ်မှ စိုးရိမျမလှူ၏ဤပုံစံအတွက်ဖမ်းမိခံရသော်လည်းလူတို့သညျအဘို့။
အဓိကအချက် - ညစ်ညမ်းကစားခြင်းကာလအတွင်းပြန်ပေးဆွဲခံရသော ဦး နှောက်သည်နေရာတိုင်းတွင်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဘယ်ဟာကောင်းတယ် ... သင် ဦး တည်ရာကိုနှစ်သက်လျှင်။
ပင်ကိုယ်မူလအထောက်အပံ့ကိုကြည့်ပါ - လေ့လာမှု ၃၀ ကျော်သည်တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံမှု)၊ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
'shemales' ကိုမည်သူဆွဲဆောင်သနည်း။ gynandromorphophilic အမျိုးသားများကားမည်သူများနည်း။ လိင်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်မှုကိစ္စပါ ၀ င်သောအမျိုးသားများအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာများ (၂၀၁၅)
HOCD များအတွက် exposure ကုထုံး? porn-related HOCD ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုသမှု protocol ကိုတောင်းဆိုဖြစ်နိုင်သည်
ရုံ Porn ကစားတဲ့မှာဆုံးရှုံး, သင့်ဆောင်းပါးများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်တယ်။
စကားလုံးတစ်လုံးနီးပါး၊ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးထဲကလူငယ်တွေနဲ့အတူတူပဲ။ မင်းရဲ့စာဖတ်ခြင်းကငါ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုအခြားသူရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်သလိုပါပဲ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ဖြင့်စောစောစီးစီးစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုဖော်ထုတ်ရန်အခွင့်အလမ်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် dopamine အောက်ဘက်လိမ်အားဖြင့်အင်တာနက်ကိုအကန့်အသတ်မရှိသာအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်သင်၏ဆောင်းပါးပါလူငယ်များကဲ့သို့တူညီသောလက္ခဏာများရှိခြင်းကြောင့်ရှုပ်ထွေးသွားသည်။ တကယ်တော့ဒီအတွက်ကြောင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေမတွန့်ဆုတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါ့ရဲ့အတွေးတွေ၊ လက္ခဏာတွေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုလူတစ်ယောက်ရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရတာအရမ်းအစွမ်းထက်တဲ့အရာပဲ။
အလားတူအမှုအရာအဖြစ်ကောင်းစွာငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ပါပြီ။ ခဏငါ bi သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို / ငုပ်လျှိုးနေလိင်တူချစ်သူဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်။ ငါ့နှလုံး၌ငါတကယ်မိန်းကလေးငယ်များဖို့ဆွဲဆောင်နေပါတယ်ငါသိ၏။ ကြာကြာကျွန်မ porn မပါဘဲသွား, အလျော့နည်းပြင်းထန်သောကြောင့်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ငါကိုတောင်တကယ်လိုချင်တယ်။ ငါတစ်လမှ3ရက်သတ္တပတ်သွားလျှင်, ငါလွယ်လွယ်ကူကူအဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများဓါတ်ပုံတွေကိုတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် masturbate နိုင်ပါတယ်။ ထိုနောက်ငါ shemales နှင့်တခါတရံလိင်တူချစ်သူမှတစ်ခါတစ်ရံနောက်ဆုံးမှာပြန်အမာခံရုပ်ရှင်သွားနှင့်။